नेपाली बाल कराते खेलाडी रन्जितलाई ‘वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड’ अवार्ड – सम्मान स्वरुप एक शेयर गरौँ ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/नेपाली बाल कराते खेलाडी रन्जितलाई ‘वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड’ अवार्ड – सम्मान स्वरुप एक शेयर गरौँ !
नेपाली बाल कराते खेलाडी रन्जितलाई ‘वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड’ अवार्ड – सम्मान स्वरुप एक शेयर गरौँ !
काठमाडौं । नेपाली बाल कराते खेलाडी आर्यन रन्जितले ‘वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड’ युके अवार्डबाट सम्मानित भएका छन् । उनलाई मंगलबार ‘वल्र्ड बुक अफ रेकर्ड’ अवार्डको प्रमाण पत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो । सानो उमेरमा खेलकुदमा पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै आर्यनलाई यो अवार्डबाट सम्मान गरिएको हो । खेलकुद क्षेत्रबाट नेपालबाट सम्मानित हुने आर्यन पहिलो भएको उनका पिता सञ्जयले जनाएका छन् ।
त्यसका लागि नेपाल ओकिनावा सुरिकेन सोरिन रियो कराते डो संघका अध्यक्ष किसनराज सिंहले पहल गरेका थिए । आर्यनले नेपालमा भएको विभिन्न पाँच अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिता खेलेका छन् । पाँचैमा उनले स्वर्ण जित्नुका साथै उत्कृष्ट खेलाडी भएका थिए ।
भारतमा भएको दुई अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रतियोगितामा नौ वर्षीय आर्यनले दुवैमा स्वर्ण जितेका थिए । सिंगापुरमा भएको प्रतियोगितामा उनी तेश्रो भएका थिए । आर्यनले थाइल्यान्ड र मलेसियामा भएको प्रतियोगितामा पनि सहभागिता जनाएका थिए ।
महिनावारी भएको बेला पुजापाठ गर्न, मन्दिर जान हुन्छ कि हुँदैन? यस्तो छ तथ्य सबैले जान्न जरुरी…